Diintu ma jinsiyadbaa? Mise waa mabaadi’ la rumaynayo ? | alirshaad.com
Diintu ma iyadaa baahan, mise waa loo baahan yahay? »
Diintu ma jinsiyadbaa? Mise waa mabaadi’ la rumaynayo ?
Dad badan baa arrintaa garashadeeda ka lunsan, waase garan lahaayeene, fiiro iyo fakar baan la waafajin. Waxay moodayaan, inay Diintu tahay, sida jinsiyad lagu dhasho, oo ma guuraan iska ah!!. Mar hadduu qofku “soomaali” yahay, ama “carab” yahay, ama “bakistaani” yahay, ama ummad kaloo Islaamka sheegata yahay, inuu weligi muslim iska yahay bay la tahay..!!
Hadduu Diinta iyo Anbiyada caayayo, waa u muslim ..!!
Hadduu Sharciyada Diinta, ka jecel yahay, sharciyada dadka, waa u muslim..!!.
Hadduu inuu gaalada ku daydo jecel yahay, inuu Nabiga ku daydana neceb yahay, Waa u muslim…!! . Hadduu wax walboo ay gaaladu gaala ku noqdeen falayo , waa iska muslim..!! .
Dadka noocaa ah, waxay gaalnimo u yaqaanniin ,qofkoo yiraahda: “anigu kufri baan doortay, oo Islaamkii baan nacay”. kaafirka ay yaqaanniin waa kaa keliya..!!. Kuwaa dhawr arrimood, baan xusuusinayaa:
Diintu jinsiyad ma ahan, iyo dhalasho aan kaa guureyn. Diintu waa xaqiiqooyin jira, oo Rabbi dadka ugu yeerayo, inay ogaadaan, oo wada rumeeyaan, dhaqankoodana waafajiyaan. Koodii xaqiiqooyinkaa maqla, oo rumeeya, dhaqankiisana waafajiya, baa la yiraahdaa, “mu’min” ama “muslim”, kii diiddanna waxaa la yiraahdaa “kaafir”, iyo “mushrik“, ama “gaal” sida ay soomaalidu u taqaan.
-“هو الَّذي خلقكم فمنكُم كافرٌ ومنكم مُؤمن” (التغابن)
Sidaa darteed, bay nabi Nuux عليه السلام iyo wiilkiisu, u kala noqdeen laba Diin. Oo nabi Ibrahiim عليه السلام iyo aabbihi, u kala noqdeen laba Diin. Oo nabi Muxammad (عليه الصلاة والسلام) iyo adeerradi iyo tolki u kala noqdeen laba Diin.
Waxaa la inoo sheegay, inuu Ibliis “kaafir” noqday, mana oran: “inaan “kaafir” noqdaan rabaa”, ee amar soo gaaray, buu diidey inuu u hoggaansamo. Wuxuu “Allaah” yiri:
(إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) (البقرة)
waa u diidey oo isweyneysiiyey: (أبى واستكبر)
Qur’aanku wuxuu inoo sheegay, inay Yahuud, iyo Nasaaraba, yihiin “kufaar”, iyo inay gelayaan Jahannama:
-“إنَّ الَّذين كفرُوا من أهل الكتاب والمُشركين في نار جهنَّم” (البينة)
Qur’aanku wuxuu kaloo inoo sheegay, inay Yahuud, iyo Nasaaraba sheeganayaan, inay dad oo dhan iyagu u hanuunsan yihiin. Middoodna ma oran: “inaan gaala noqonno baan rabnaa”.
-“وقالُوا: لن يدخل الجنّة إلا من كان هُودا أو نصارى” (البقرة)
-“وقالُوا: كُونُوا هُوداً أو نصارى تهتدُوا” (البقرة)
Waxayse kufaar ku noqdeen, amarro soo gaarey, bay sidii Ibliis ka dhega adaygeen, ilaa iyo samankaanna, waa sidoodii, waxay sheeganayaan, Iimaanka Rabbi doonayo inay keligood haystaan.
Intaa sow kuma garan kartid, inayan Diintu jinsiyad lagu dhasho ahayn, sheegashana waxba u tarayn qof sidii Ibliis amarkii Rabbi u hoggaansami waayey.